Ziso rine chiperengo chekuongorora | Martech Zone
Chipiri, Mbudzi 11, 2008 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Vhiki rino ndangopedza kuverenga Kururamisa Rurimi Rwaamai: Kubva kuOlde Chirungu kuenda kuemail, iyo Tangled Nhau yeChirungu Spelling by David Wolman.
Iwe unogona kusaziva chinonzi kunyora uye etymology uye ndizvo zvakanaka. Ndinoziva ndiri buraira regirama uye chiperengo, asi bhuku iri rakaita kuti ndinzwe zviri nani zvishoma nezvehunyanzvi hwangu. Kune mamirioni emazwi mururimi rweChirungu, asi avhareji chikoro chepamusoro anopedza anoziva nezve 60,000. Icho chokwadi ndechekuti vazhinji vedu hatizive kuti ruzhinji rwemazwi ari chii mumutauro wedu!
Wedu mutauro unenge usina kutaura zvakanaka uye uri mutauro usingabviri kudzidza. Vamwe vanhu vanodavira kuti kuperetera zvisina maturo chiratidzo chekusaziva, asi Shakespeare pachake aishandisa kugadzira mazwi ekupereta sezvaakangoona zvakakodzera. Ainzwa mabhii uye mazwi kunge ivhu kune muvezi. Fungidzira kana ndikagadzira mazwi angu ekuzvitsvakira pane ino blog, vanhu vangandidzikisira (chaiko vasati vaenda).
Apo patinopinda mune chiuru chemireniyumu, tinozviwana tave kutaura mazwi zvine chekuita netekinoroji izvo zvingangodaro zvisingambozviwana ivo mune chero duramazwi rakagadziriswa ...
Kana iwe usingatendi kuti tiri kugadzira mazwi matsva sezvatinoenda, iwe unongofanirwa kutarisa kumashure munguva kuti OK…. kana ndizvo Zvakanaka… Kana ndizvo zvakanaka or ole kurreck. Chimbofunga, vazukuru vako vanogona kuve nechikamu chekutaurirana kwavo kwemazuva ese, rofl, lmao, asap, lol, ttfn.
Hautende here? Zvakadii neshoko Scuba, iyo yaimbove chirevo cheIyo-Yakave Pasi pemvura Kufuridza Midziyo. Ko izvi Blog, iyo isingasviki makore gumi apfuura yaive Danda rewebhu! Nezwi rauya blogger, blogged, blogging uye blogware. Inguva inonakidza zvakare nekuti mazhinji emazwi, mazwi ekuremekedza kana makodhi mapfupi ari kugadzirwa online nhasi anoshandiswa pasirese.
Zvakare, zvinonakidza kuti kushambadzira uye kushambadzira hazvidi kutevedzera mitemo yekunyora. Tine makambani akaita seGoogle, zvinhu zvakaita seiyo iPhone uye zvigadzirwa zvakaita seSemic izvo zvese zvinogamuchirwa - asi isu tine shiviriro shomashoma yekukanganisa zvisirizvo mune zvatiri zvemukati. Ndinofunga zvinonakidza.
Totenda kunaka isu tichiri kugona kuvimba nespelcheck!
Ziso rine chiperengo chekutarisa,
Yakauya nePea Sea yangu.
Iyo ndege lee inomaka mana revue yangu
Miss Steaks ini ndinogona kusunda gungwa.
Ziso rova ​​iyo quays uye nyora izwi
Uye huremu ina izvo zviviri zvinoti
Mamiriro ekunze ziso ndinyore chikwasheni zvisizvo
Inondiudza yakananga kurema.
Ini ndinokukurudzira kuti utore kopi yebhuku, iko kunonakidza kufamba kuburikidza nenhoroondo. David anochengeta kuverenga kwakanyanya. Kunyanya kunakidza ndechekuti anorondedzera kwese kwakatangira chiRungu sezvo iye, iye, achishanyira nzvimbo dzavakashandurwa. Zviri kuverenga kukuru!
Tags: uwandu hwehuwandupakati nepakatiBrand Kuongororanhoroondo yevatengikuchera dhatabhesikeyword vhoriyamukucheraYeMahara neThebhu Kushambadziraonline kutenga munhuvanhu
Vese Vakapa Vamwe, Vamwe Vakapa Zvese. Ndatenda.
Bill Bryson's zvakafanana zita uye bhuku rekutanga nderimwe bhuku rakanaka, kana ukasarangarira Bryson's relentlessly-throwing-facts-at-you" maitiro ekunyora. Handisati ndaverenga bhuku raWolman, saka handizivi kuti kupindirana kungava kwakadii.
Nov 12, 2008 na1:14 PM
Dan, ndingafanira kutarisa izvozvo. Rimwe remabhuku angu andaifarira gore rapfuura raive A Short History of Nearly Everthing naBill Bryson!
Nov 15, 2008 na4:53 PM
Hongu, Short History ndiyo chaiyo yandakanhonga rurimi rwaamai pandakasangana narwo.